Matanho gumi nemashanu ekuvandudza kuvanzika kwako nekuchengeteka muIOS (II) | IPhone nhau
Wese munhu anofanira kukwanisa kuziva kuti sei uve nehutongi hwakazara hwehunhu hwako uye chengetedzo, kunyanya munguva dzakadai. Nepo vashandisi ve iPhone ne iPad vachipa vashandisi veApple runyararo rwepfungwa, vanogadzira webhusaiti, uye kunyangwe Apple, vachiri kuunganidza ruzivo rwemunhu kubva kumidziyo.
Kuti unzwisise izvi zvakadzama uye kudzidza nzira dzekuvandudza yako zvakavanzika uye chengetedzo kunyangwe paIOS, isu takanyora dzakawanda sarudzo dzatichazokutumira iwe kuendesa kwakadzama kaviri. Iyi ndiyo yechipiri, asi unogona kutarisa yekutanga pano.
Dzima meseji mameseji
Kana iwe usingade kuchengetedza mameseji ekare, iOS inogona kuzvibvisa otomatiki. Vhura Zvirongwa wobva wasarudza mameseji. Bhurawuza uye tora Sevha mameseji uye sarudza pakati pegore rimwe kana mazuva makumi matatu. Chero meseji yakura kupfuura sarudzo yako inozonyangarika pachishandiswa.
Kuongorora zvakavanzika muSafari
Iyo yakavanzika yekuvhura modhi muSafari inokutendera iwe kutarisa usingachengetedze nhoroondo marekodhi kana logins pane chako kifaa. Ingo vhura Safari uye tinya pane iyo tabo icon pazasi kurudyi. Wobva wasarudza Yakavanzika.
Ad Ad Tracking Limit muSafari
Kana iyo pfungwa kubva kune vanoshambadzira yekuziva zvese zvinogoneka nezvekushandiswa kweiyo iPhone nePadad inokutyisidzira iwe, unogona kuidhonzera. Iyi sarudzo inowanikwa muZvirongwa. Sarudza zvakavanzika uyezve Kushambadzira pazasi. Shandisai muganhu weiyo Kutsvaga KweAd.
Dzinga nzvimbo yekutevera
Kudzoka mumasisitendi makuru epachivande, tora nzvimbo masevhisi. Tevere, tinya pane System Services pazasi. Tiri kudzima nzvimbo yekutevera. Iwe unogona kuita izvi kune ese enzvimbo-dzinoenderana nesarudzo dzinoonekwa (chenjedzo, Apple zviziviso, uye matipi) kana chero chaunoda.
Dzima Goverana nzvimbo yangu
Yako yekupedzisira basa mukati meiyo nzvimbo masevhisi chikamu cheMasetingi kudzima Govera nzvimbo yako neshamwari uye nemhuri. Izvi zvinowanzo shanda kana iwe uri kushandisa iyo Tsvaga Shamwari Dzangu application. Chero nzira, Govera Nzvimbo Yangu iri ipapo pane iyo skrini yezvisarudzo kuti iwe ubate uye uidzime.
VPNs zvinokutendera kuti uvanze hunhu hwako nekukubvumira kuti utarise kubva kune rakasiyana IP kero. Mazhinji emahara maVPN masevhisi anowanikwa paApp Store; Betternet ndeimwe yevakakurumbira. Kana iko kunyorera kurodha pasi uye kuisirwa, zvese zvaunofanirwa kuita kumisikidza kana kuita kuti VPN isabatise bhatani riri kurudyi kubva kuZvirevo.
Otomatiki kukiya marongero
Nekutadza, iPhone nePadad vanofanirwa kukiya otomatiki mushure meminiti imwe yekusaita. Izvi zvinoreva kuti iyo skrini inodzima uye iwe uchafanirwa kuivhura neTouch ID kana passcode kuti upinde zvakare. Kuchengetedza chishandiso kure nemaziso anodzungaira, ino nguva yekumisikidza inogona kupfupiswa kusvika pamasekondi makumi matatu. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kuenda kune yako Ratidza menyu uye nekujeka marongero. Sarudza otomatiki kukiya wozoisa nguva kumasekondi makumi matatu.
Kana iwe ukagovana chako chishandiso nevana uye iwe usingade kuti ivo vashandise zvimwe maficha, iyo sarudzo yekugadzira zvirambidzo inokupa iwe yakawanda zvivakwa. Kutanga vhura Zvirongwa, tinya Zvakawanda uye tapota Kurambidzwa. Iwe uchaona izvo zvirambidzo zvakavhurwa uye iwe unogona kudzima mamwe maapplication, masevhisi senge iTunes Chitoro, uye mukati-app kutenga. Iwe unogona zvakare kudzikisira iTunes zvemukati nezera-yakatarwa ratings, tarisa zvakavanzika marongero, uye zvimwe. Tarisa-tarisa zvakakukomberedza kuti uone zvinoshanda zvakanyanya kupihwa wega mamiriro ako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » 15 matanho ekuvandudza yako yakavanzika uye chengetedzo pane iOS (II)